Aarsenik - Gpedia, Your Encyclopedia
Aarsenik (ingiriis: Arsenic) astaanta (As) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay sodon-iyo-sadex (33). Curiyaha Aarsenik waa Bir la Mood ka tirsan curiyayaasha Guruubka 15aad, (Pnictogens), ee Diwaanka Curiye.
Aarsenik waa adke, midab cagaar madoow leh taas oo inta badan la helo ayadoo iskudhisyo ka mid ah, inta badan Salfarta.
Markii u horeeysay curiyahan waxaa helay saynisyahan Albertus Magnus sanadkii 1250.
Isku dhisyad Aarsenik iyo Naxaasta waxaa laga sameeyaa jaandiga ku dhex jira beeytariga baabuurta iyo sheeyo kale oo kul iyo koronto gudbiyeyaal ah. Neefta Aarsenik waa mid sun ah oo noolaha neefsada waxyeelayn karta.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aarsenik&oldid=142149"